Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: domina tapany hahazony erany | NewsMada
Rehefa ela ny ela, tonga saina ihany angamba ireo nametrahana andraikitra hanao ilay voalaza ho fampihavanam-pirenena, fa tsy mahaleo ny sarany ny fandaniana mikasika ny fikoloana ny sampan-draharaha itoerany. Mety misy amin’izy ireo koa anefa no mino amin’ny fo madio, ny filàna azy ireo hampilamina ny sehatra pôlitika.
Ny ankamaroan’ny olona dia efa resy lahatra avokoa fa tsy ny disadisa mety hiseho eo amin’ny mpiaramonina no ilaina andaniam-bola. Lalànam-piainana ny fitrangan’ny olana ao anatin’ny fiarahana, ka na eo anivon’ny ankohonana aza dia misy ny fifamaliana, izay mety hiitatra hatrany amin’ny fisarahana mihitsy. Raha eto amin’ny sehatry ny firenena, marina fa tsy ilaozan’ny hevitra tsy itovizana, saingy tsy misy fisaraham-bazana mitaky mpamono afo vonjy maika. Ady amin’ny setrasetran’ny fahantrana sy tsy fandriam-pahalemana no ilàna ny fisikinan’ny rehetra. Rehefa ireo fositra roa ireo no resy, milamina ny mponina.
Tsapan’ireo mpampihavana fa mila mihetsika sy miseho izy ireo mba hampateza ny seza itoerany, koa dia indreo izy misisika mitady fibahanana toerana anivon’ny fanaovana ezaka mba hizotra am-pilaminana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Arahaba soa arahaba tsara. Na efa azo heverina aza fa ivelan’ny fihoaram-pefy mety hitranga toy ny
amin’ny fifaninanana rehetra, dia tsara fifehezana ny fijoron’ny fifidianana izany, hoe efa samy mampiseho fahavononana avokoa ireo sampana rehetra mba samy hisoroka sy hanitsy ary hanarina ny raraka sy izay mitongilana, ary ny karazan’izay tsy an-drariny rehetra mifanandrify amin’ny andrakitra miankina aminy.
Nanomana karazana fianianana ho an’ireo mpilatsaka ho depiote ireto mpampihavana, mba hanomezan’izy ireo antoka am-pahibemaso mikasika ny fanatanterahany ny zava-drehetra ampanantenainy ny mpifidy. Fampidirana amin’ny loza izany ! Fanomezan-daka ny famitapitahana. Ny depiote anie tsy ao anatin’ny fahefana mpanatanteraka. Ny depiote, na voafidin’ny mponina anivon’ny disitrika isan’isany aza, dia depioten’i Madagasikara, izany hoe tsy hitsinjo ny tombontsoa manokan’ny faritra nifidy azy. Raha atao bango tokana dia tsy manam-pahefana hampandroso ny faritra nihaviny izy ireo. Ny adidiny dia ny fitsinjovana ny tombotsoam-pirenena avy amin’ny lalàna nofidiny, ary koa amin’
ny fanaraha-maso ny asa ataon’ny mpanatanteraka sy ny fampiasan’izy ireo ny vola-panjakana.
Noho izany, ny fanaovana izany adidy izany ao anatin’ny fahadiovana no azon’ny mpilatsaka ho solombava-bahoaka anomezan-toky.